आज मुख्यमन्त्री राईको बिवाह ,बेहुलो बन्दा यस्ता देखिए
द क्लिफले भित्र्यायो नयाँ खेल: जर्ब बल
छोरी जेनिसाको केही समय अगाडि पत्थरीको अप्रेसन गरिएको थियो । तर अप्रेसन गरेको ठाउँमा इन्फेक्सन भएर थप उपचार गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि घर परिवारमा सल्लाह गरेर काठमाडौं जाने निधो गर्यौं ।
हिजो साँझ लु.१ च. ९७३१ नम्बरको जिपमा म, छोरी जेनिसा र श्रीमती जमुना काठमाडौंका लागि हिँड्यौँ । जिप चालक सूर्य केसी थिए ।यात्रा राम्रैसँग चलेको थियो । बिहानीपख निद्राले अलि झकाएको थिएँ । एक्कासी छोरी र श्रीमती चिच्याए । आँखा खोल्दा गाडी गड्याङग गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो र त्रिशुलीमा पुग्यो।
बग्दै गरेको गाडीको झ्याल ढोका खोल्ने प्रयास गरेँ । मैले अलिकति पानी पनि पिइसकेको थिएँ । अब सक्कियो भन्ने लागेको थियो । केही तल पुगेपछि संयोगले ढोका वा झ्याल के खुल्यो । म बाहिर निस्किएँ । तर, ड्राइभर, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन ।
पौडी खेलेर नदी पार गरेँ । मैले गुहार माग्न चिच्याए । तर कसैले सुनेन । मुस्किलले राजमार्गमा आएँ । काठमाडौंबाट आउँदै गरेको ट्रकलाई रोकेर घटनाबारे बताएँ । ट्रक ड्राइभरले प्रहरीलाई खबर गरे।
मुग्लिनबाट प्रहरी टोली तुरुन्तै घटनास्थल पुग्यो ।त्यतिबेलासम्म मैले आफ्नो भिजेको लुगा खोलेर ट्रक ड्राभइभरको लुगा लगाएको थिएँ । प्रहरीले मलाई गाडीमा हालेर भरतपुर पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि ल्यायो।
प्युठानबाट बिरामी छोरी बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको पिकअप भ्यान बिहीबार बिहान साढे ५ बजे त्रिशुली नदीमा खस्दा रोकाका श्रीमती र चालकको मृत्यु भएको हो भने छोरी बेपत्ता भएकी हुन् ।
दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा मुकुन्दकी श्रीमती ३३ वर्षीया जमुना रोक्का र चालक २३ वर्षीय सूर्य केसी रहेका छन् । बिरामी छोरी १५ वर्षीया जिनिसा रोक्का बेपत्ता छिन् । प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका वडा नम्बर १ घर भएकी ३३ वर्षीया जमुना रोक्का र पिकअप भ्यान चालक २३ वर्षीय सूर्य केसीको शव फेला परेको हो । उनीहरुको शव पिकअप भ्यानभित्रै भेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
पिकअप भ्यान सडकबाट करिब ६० मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । बेपत्ताको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
गायिका शान्ती श्री परियारलाई पुत्री लाभ…
निर्देशकको यस्तो हर्कतले रोईन नोरा !
बर्दियामा गुडिरहेको मोटरसाइकलबाट बाघले झम्टेर लगेकी महिला मृत फेला
दाङमा जङ्गली बँदेलको आक्रमणबाट चार घाइते
रमेश प्रसाईलाई झापामा नागरिक अभिनन्दन